सर्वाधिक खोजी गरिएका गोरे कसरी काठमाडौ फेला परे ? सिंहदरबारमै गोरेले यसरी खोलेर देखाइदिए (भिडियोसहित) | Rajmarga
सर्वाधिक खोजी गरिएका गोरे कसरी काठमाडौ फेला परे ? सिंहदरबारमै गोरेले यसरी खोलेर देखाइदिए (भिडियोसहित)
काठमाडौ । तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या काण्डका मुख्यअभियुक्त चुडामणि शर्मा ‘गोरे’ लाई प्रहरीले गृहमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर गोरेलाई सार्वजनिक गरेको हो। लामो समयदेखि फरारको सूचीमा राखेर व्यापक खोजी गरिएको गोरे राजधानीकै पशुपति क्षेत्रबाट पक्राउ परेको घटना थप रहस्यमय बनेको छ। भारतमा समेत खोजी गरिएको गोरे यति लामो समयसम्म राजधानीमै रहनुलाई गम्भीर रहस्य मानिएको छ ।
पौडेलले गोरेलाई काठमाडौंको गौरीघाटबाट मंगलबार बिहान ५ बजेतिर पक्राउ गरिएको बताए। उनले यो मुद्दा ‘जेरी’ जस्तो जेलिएको भन्दै ‘पत्रपत्र’ गरेर निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले यो मुद्दामा मुद्दा दर्ता भएकाहरुबाहेक पनि अरुको संलग्नता रहेको संकेत गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा गोरेलाई प्रहरीले मुख छोपेर ल्याएका थिए । पत्रकारहरुले तस्वीर र दृष्य खिच्न उनले लगाएको क्याप हटाउन आग्रह गर्दा गोरेले भने मास्कनै हटाएर पूरै अनुहार देखाइदिएका थिए । गोरेले यसरी पत्रकार सम्मेलनमा अनुहार देखाएपछि प्रहरीले उनलाई हतार हतार बाहिर निकालेको थियो ।
लामो देशकै ठुलो चर्चाको विषय बनेको गोरे प्रकरणमा प्रहरीले इन्काउन्टरको तयारी भइरहेको सूचनाहरुसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर उनी राजधानीबाटै पक्राउ पर्नु र यो मुद्दामा अरु धेरैको समेत संलग्नता रहेको अनुसन्धान टोलीले बताउनुले गोरीलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ्ग’ को अवसर दिने र ‘मुख्य अभियुक्तहरु’लाई बचाउने खेल भएको आशंकासमेत अपराध विशेषज्ञहरुले गरेका छन् ।
मोरङको उर्लाबारीका गोरेलाई नेपालमा हुने सुन तस्करीको डन अर्थात् ‘गोल्ड डन’ पनि भनिन्छ। नेता, व्यापारी र प्रहरी उच्च अधिकारीसँगको सम्बन्धका आडमा उनले सुन तस्करी गरिरहेका थिए। मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका गोरेका बाबु नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक थिए।
सुन तस्करीमा लाग्नुभन्दा पहिला उनी दुबई प्रहरीमा जागिरे थिए। त्यही क्रममा दुबईका सुन माफियासँग उनको सम्बन्ध गाँसियो। केही समयपछि गोरे नेपाल फर्किए।
उच्च तहका नेतासँग हिमचिम बढाउन थाले। उनले प्रभावमा पार्नकै लागि मान्छे हेरेर महंगा उपहार दिए। स्थानीय तह र संसदीय चुनावका बेला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। स्थानीय चुनावमा उनले केही नेतालाई गाडी पनि किनिदिएको थिए।
लामो समयदेखि अवैध सुनको कारोबार गर्दै आएका उनी त्यही सम्बन्धका आडमा उम्किँदै पनि आएका थिए। ०७३ पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बरामद गरेको ३३ किलो अवैध सुनका मालिक गोरे नै भएको भरिया र अन्य अभियुक्तले बयान दिएका थिए। उच्च पहुँचकै भरमा त्यतिबेला गोरेको ठाँउमा अन्य केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर उनलाई उम्काइएको स्रोतको दाबी छ।
सिआइबीले सुन तस्करीमा संलग्न ३३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुई मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा १५ करोड ४० लाख चार हजार आठ सय ८ रुपैंया २६ पैसा र तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल र एक करोड ४२ लाख ८३ हजार आठ सय ९२ रुपैंया ४० पैसा गरी कूल १६ करोड ८२ लाख ८८ हजार सात सय रुपैंया ६६ पैसा बराबरको बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो जफतको दाबी माग गरिएको थियो। उनी खुलमखुला काठमाडौंमा हिँडिरहेका थिए प्रहरीले भने सो मुद्दामा गोरेलाई फरार भनेको थियो।
स्रोतका अनुसार त्यतिबेला गोरेकै डिजाइनमा पक्राउ परेका भरियासँग कनेक्सन भएका मानिसलाई पनि मुछियो। ‘गोरेले जसको नाम दिए उनैलाई मुख्य अभियुक्त बनाइयो जसको भरियासँगै अन्य कारणले टेलिफोन कनेक्सन थियो, सुनसँग थिएन,’ स्रोतले भन्यो।
तस्करीको सुनको मालिक भनेर पोलेका गोरे पहुँचकै भरमा सामान्य कारबाहीबाट उम्केपछि उनको मनोबल बढ्यो। अवैध सुन नेपाल भित्र्याउने क्रम झनै बढ्यो। फागुन पहिलो साता विमानस्थल हुँदै भित्रिएको ३३ किलो सुन हराएपछि गोरेले सुन लुकाएको आशंकामा आफ्ना मुख्य सहयोगी शाक्यलाई गौरीघाटबाट उठाएर सप्तरी लगेर यातना दिएर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
हत्यापछि गोरेले नै प्रहरीलाई फोन गरेर घटना मिलाउन भन्दै मद्दत मागेका थिए। उनको मद्दतलाई स्वीकार गरी महानगरीय प्रहरी महाशाखाको टोली सुनसरी पुगेको थियो। सुनसरीमा शव फेला पारे पनि महाशाखाको टोलीले मोरङमा लगेर शवको बरामदी मुचुल्का बनाएको स्रोतले बतायो। प्रहरीकै सूचनाका आधारमा गोरे भागेर भारत पुगेका थिए।
तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका ७ अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मोरङले वैशाख १९ गते ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा संगठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १६३ पेजको अभियोगपत्र बनाएको छ। मुद्दामा प्रतिवादीसँग १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४१३ रुपैयाँ ९० पैसाको बिगो दाबी गरिएको छ। प्रहरीले पूर्वडिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी, सञ्जय राउत, सई बालकृष्ण संजेल र प्रहरी जवान विष्णु खड्कासहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालत पेस गरेको छ।
Previous post: हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणका नाइके ‘गोरे’ अचानक पक्राउ
Next post: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा केन्द्रीय समितिकाे नामावली सार्वजनिक, ल हेर्नुस ककस्को नाम छ ?
दुवै खुट्टा नभएका लाहुरेको सगरमाथा सपना
नेपालका चार शहीदका अचम्म लाग्ने कुराहरू, कोही प्रेमिकाको जूठो बार्ने, कोही आफै फाँसी लगाउने शहीद